တရုတ် SL 3D ပရင်တာ-3DSL-450S ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
SL 3D ပရင်တာ-3DSL-450S
3DSL ပရင်တာ-S ကစီးရီး၏ဒုတိယမျိုးဆက်
မက်စ်အသံအတိုးအကျယ်ကိုတည်ဆောက်: * 450 450 * 330 (မီလီမီတာ) (စံ 330mm, ဗဓေလသစ်တိုင်ကီ၏အတိမ်အနက်ကိုချုပ်စေနိုင်ပါတယ်) ။
မက်စ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား: 120g / h
လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံ (RP) ပထမဦးဆုံးအနှောင်းပိုင်း 1980 ခုနှစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့အသစ်တစ်ခုကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော CAD နည်းပညာ, ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ, လေဆာနည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းနည်းပညာအဖြစ်ခေတ်မီသိပ္ပံနည်းကျနှင့်နည်းပညာအောင်မြင်မှုများပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများမတူဘဲ, လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံအလွှာပစ္စည်းများစက်သုံးရှုထောင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှေ့ပြေးပုံစံမှ superimposed ထားတဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းယန္တရားကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ပထမဦးစွာယင်းအလွှာ software ကိုတစ်ဦးအခြို့သောအလွှာကိုအထူသည်နှင့်အညီအစိတ်အပိုင်းများ၏ CAD ဂျီသြမေတြီ slices နှင့်ပုံအချက်အလက်များ၏စီးရီးရရှိသွား။ လျင်မြန်စွာရှေ့ပြေးပုံစံစက်များ၏ဖွဲ့စည်းခေါင်းနှစ်ခုရှုထောင်ပုံသတင်းအချက်အလက်များအရသိရသည်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နေပါတယ်။ ခဲသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအပိုင်းပါးလွှာအလွှာဖွဲ့စည်းရန်ဖြတ်အလိုအလျောက်သုံးရှုထောင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ superimposed
ရိုးရာလျှော့ချရေးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်မတူဘဲ RP အစိုင်အခဲမော်ဒယ်များကို process တစ်ခုအလွှာ-by-layer ကိုပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်လည်းအပိုဆောင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှု, (လေး) သို့မဟုတ်အလွှာကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, (LMT) ဟုခေါ်သည်။
RP technique ကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
H ကို ighly ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ကမဆိုရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံ၏မည်သည့် 3D အစိုင်အခဲမော်ဒယ်များထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး, ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ထုတ်ကုန်များ၏ရှုပ်ထွေးနီးပါးလွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ကို C အေဒီမော်ဒယ်ကိုတိုက်ရိုက်မောင်းနှင်မှု, ထိုတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမကအထူးလ်တာသို့မဟုတ် tools များလိုအပ်သည်, လုံးဝဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ပြီး, ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း (CAD / CAM) အလွန်အမင်းဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်ပါတယ်။
H ကို igh တိကျမှန်ကန်မှု, 0.1% ±
H ကို ighly, လျော့ချရေးအလွန်ချောအသေးစိတ်ကိုအောင်နိုင်စွမ်း, ပါးလွှာနံရံများ
M က အဟောင်းမျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်
F ကို ast မြန်နှုန်း
H ကို ighly automated: ဖြစ်စဉ်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါသည်, ထိုဖြစ်စဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမကလူ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်တယ်, နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပိုင်ရှင်မဲ့နိုင်ပါတယ်
RP နည်းပညာ၏ Applications ကို
မော်ဒယ် (Conceptual & တင်ပြ):
စက်မှုဒီဇိုင်းအယူအဆထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းအယူအဆ၏ပွနျလညျထူထောငျဖို့အစာရှောင်ခြင်း access ကို ပြပွဲ, etc ။
ရှေ့ပြေးပုံစံ (ဒီဇိုင်း, သုံးသပ်ခြင်း, အတည်ပြု & စမ်းသပ်ခြင်း):
ဒီဇိုင်းစိစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စသည်တို့ကိုဒီဇိုင်းပြန်လုပ်နှင့် optimization
ပုံစံများ / အစိတ်အပိုင်းများ (က Secondary မှို & Operations & အသေးစား-အများကြီးထုတ်လုပ်မှု Casting):
လေဟာနယ်ဆေးထိုး (silicone မှို), အနိမျ့ဖိအားဆေးထိုး (RIM, epoxy မှို) စသည်တို့ကို
ဒီ application ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေ object တစ်ခု, 2D drawings သို့သို့မဟုတ်မယ့်စိတ်ကူးတစ်ခုကနေစတင်နိုင်ပါသည်။ သာအရာဝတ္ထုရရှိနိုင်ပါသည်ဆိုပါက, ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ CAD ဒေတာရရန်အရာဝတ္ထု scan ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, engineeing ဖြစ်စဉ်ကိုသို့မဟုတ်ရုံပြင်ဆင်ရေးသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံ revese ထို့နောက် RP လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့သွားပါ။
2D drawings သို့သို့မဟုတ်စိတ်ကူးတည်ရှိပါကအထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီး 3D မော်ဒယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသွား, အဲဒီနောက် 3D prining ဖြစ်စဉ်ကိုသှားဖို့လိုအပ်ပေသည်။
RP ဖြစ်စဉ်ကိုပွီးနောကျ, သငျသညျ, functional ဖြစ်စေစမ်းသပ်မှုများအတွက်အစိုင်အခဲမော်ဒယ် get စည်းဝေးပွဲကိုစမ်းသပ်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အရသိရသည် ချ. အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းအမည်ဖြင့်လည်းလျင်မြန်စွာရှေ့ပြေးပုံစံကုသလေဆာအဖြစ်လူသိများ, stereolithography ဖြစ်ပါတယ်။ နိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်: ကရွေးချယ်ကုသကြောင်းဒါကြောင့်လေဆာတစျဦး၏တင်နိုင်ဖြည့်စွက်ရန်, မျက်နှာပြင်မှတန်းစီရန်ပွိုင့်ကနေ, အစိတ်အပိုင်းများ၏ Cross-Section ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီအရည် photosensitive ဗဓေလသစ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့အာရုံစူးစိုက် scan ဖတ်နေပါတယ် အလွှာ, အဲဒီနောက်ရုတ်သိမ်းပလက်ဖောင်းတဦးတည်းအလွှာအထူအားဖြင့်လျှော့ချအသစ်တစ်ခုအလွှာနှင့်အတူတစ်ဦးဗဓေလသစ် recoated နှင့်တပြင်လုံးကိုအစိုင်အခဲမော်ဒယ်ဖွဲ့စည်းသည်တိုင်အောင်အလေဆာနေဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေပါတယ်။
SHDM ၏ SL 3D ပရင်တာ၏ 2nd Generation အဖွဲ့၏အားသာချက်
H ကို igh ထိရောက်မှုနှင့်အများဆုံးမြန်နှုန်းရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်400g / ဇreach10kg နိုင်ပါတယ် 24 နာရီအတွင်းနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား။
L ကို arge တည်ဆောက် volumes ကို, မရရှိနိုင်အရွယ်အစားများမှာ360 * 360 * 300 (မီလီမီတာ), * 330 * 450 450 (မီလီမီတာ), * 600 600 * 400 (မီလီမီတာ), 800 * 800 * 550 (မီလီမီတာ)နှင့်အခြားစိတ်ကြိုက်တည်ဆောက် volumes ကို။
M က aterial စွမ်းဆောင်ရည်စျေးပေါပြီးအလွန်ခွန်အားကိုဇွဲနဲ့ high-အပူချိန်ခုခံ၏ရှုထောင့်များတွင်တိုးတက်, အင်ဂျင်နီယာ application များအတွက်သင့်လျော်သည်။
အို bviously အရွယ်အစားတိကျစွာနှင့်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်တိုးတက်လာသည်။
M က ultiple အစိတ်အပိုင်းများထိန်းချုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲတစ်ချိန်တည်းမှာကုသနိုင်ပြီးစုံလင်သောအစိတ်အပိုင်းများကို Self-ရေးသား function ကိုလည်းမရှိ။
S က သေးငယ်တဲ့အသုတ်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် uitable ။
ဦး ကွဲပြားခြားနားသောအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူဗဓေလသစ်တင့်ကားများ nique အသိုက်နည်းပညာ, 1 ကီလိုဂရမ်ဗဓေလသစ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သောအရာ, ပုံနှိပ်နိုင်ပါသည်။
R ကို eplaceable ဗဓေလသစ်တိုင်ကီ, ကွဲပြားခြားနားသောအစေးကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။
သာဆွဲထုတ်နှင့်တွန်း, သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဗဓေလသစ် print ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
3DSL စီးရီးဗဓေလသစ်တိုင်ကီ (3DSL-800 မှလွဲ. ) ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဗဓေလသစ်အကြံပေးအဖွဲ့အစားထိုးအခါ 3DSL-360 ပရင်တာအဘို့, ဗဓေလသစ်တိုင်ကီဟာအံဆွဲ mode ကိုအတူဖြစ်ပါသည်, ကအောက်ခြေဖို့စေးအကြံပေးအဖွဲ့ကိုလျှော့ချနှစ်ယောက်သော့ခတ်ဖမ်းမိရုတ်သိမ်းပေးရန်, နှင့်အစေးအကြံပေးအဖွဲ့ဆွဲထုတ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ကောင်းစွာစေးအကြံပေးအဖွဲ့ရှင်းလင်းပြီးနောက်အသစ်အစေးကိုလောင်း, အဲဒီနောက်သော့ခတ်ဖမ်းမိရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ပရင်တာစဗဓေလသစ်အကြံပေးအဖွဲ့တွန်းနှင့်ကောင်းစွာသော့ခတ်။
3DSL-450 နှင့် 3DSL 600 အတူတူပင်အစေးအကြံပေးအဖွဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲကဆွဲနှင့်တွန်းအားပေးလွယ်ကူချောမွေ့ရန်စေးအကြံပေးအဖွဲ့၏အောက်မှာ4trundles ရှိပါတယ်။
optical system ကို-အစွမ်းထက်စိုင်အခဲလေဆာ
3DSL စီးရီး SL 3D ပရင်တာ၏မြင့်အစွမ်းထက်စိုင်အခဲလေဆာစက်ကိုချမှတ် 3W နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် output ကိုလှိုင်းအလျား 355nm ဖြစ်ပါတယ်။ output power 200mw-350mw, လေအအေးနှင့်ရေအအေး optional ကိုဖြစ်ကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။
(1) ။ လေဆာစက်
(2) ။ ရောင်ပြန် 1
(3) ။ ရောင်ပြန် 2
(4) ။ Beam ကိုတိုးချဲ့
(5) ။ galvanometer
မက်စ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မြန်နှုန်း: 10000mm / s ကို
galvanometer အထူးလွှဲမော်တာဖြစ်ပြီးယင်း၏အခြေခံသီအိုရီအချို့ဟာလက်ရှိအဆိုပါကွိုင်ဖြတ်သန်းသောအခါ, ရဟတ်တစ်အချို့ထောင့်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်, လက်ရှိမီတာအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ထို deflecton နဲထောင့်ကလက်ရှိမှအချိုးကျဖြစ်ပါသည် ။ ဒီတော့ galvanometer လည်း galvanometer ကင်နာလို့ခေါ်ပါတယ်။ X နှင့် Y. နှစျယောကျဒေါင်လိုက် installed galvanometer ပုံစံနှစ်ခုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လမ်းညွန်
165mm × 123mm × 98.6mm: တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစမ်းသပ်ကားတစ်စီးအင်ဂျင်ဘလောက်, အပိုင်းအရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်
အပိုင်းအသံအတိုးအကျယ်: 416cm³, တစ်ချိန်တည်းမှာ 12 ကိုအပိုင်းပိုင်း Print
စုစုပေါင်းအလေးချိန် 6500g, ထူအကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည်: 0.1mm, Strickle မြန်နှုန်း: 50mm / s နဲ့,
ဒါဟာပြီးဆုံးရန် 23 နာရီကြာ ပျမ်းမျှအား 282g / h
productivity test- ဖိနပ်ဘဝါး
SL 3D ပရင်တာ: 3DSL-600Hi
တစ်ချိန်တည်းမှာ 26 ဖိနပ်ဘဝါး Print ။
ဒါဟာအပြီးသတ်ဖို့ 24 နာရီကြာ
ပျမ်းမျှ 55 မိနစ် တဦးတည်းဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောအဘို့
ယခင်: SL 3D printer-3DSL-600Hi
နောက်တစ်ခု: လက်ကိုင် 3D Scanner SX 3x 7X
SLA 3D ပရင်တာ
လက်ကိုင် 3D Scanner SX 3x 7X
စနစ်တကျအလင်း 3D ကင်နာ-3DSS-mini-III ကို